शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक रू. ५ करोड ३० लाख बढीको शेयर खरीदविक्री
सोमबार, फागुन २३, २०७८ मा प्रकाशित
आज कारोबार सुरु भएको एक घण्टाको अवधिमा शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
हाल सम्म कम्पनीको रू. ५ करोड ३० लाख ७८ हजार ९८ रुपिया बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । हाल कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रू. १ हजार १०१ मा कारोबार भइरहेको छ । समाचार तयार पर्दा सम्म कारोबारमा आएका २०६ ओटा धितोपत्रमध्ये उक्त कम्पनीको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आज कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १६ ले वृद्धि भएको हो । कम्पनीको आइतवारदेखि लकिङ पिरियड सकिएसँगै ठूलो मात्रामा शेयर दोस्रो बजारमा थपिएको छ । सोही कारण कम्पनीको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
यसैगरी यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ११ अंक बढेर २ हजार ५४९ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलानामा ० दशमलव २४ प्रतिसत् बढी हो।